Oko Okufuneka Ukwazi Ngombala Wemibala YePainting
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Izifundo kunye nezifundo
Umbala wokudibanisa ukudweba, umgaqo obalulekileyo kukuba kukho imibala emithathu engenakwenziwa ngokuxuba imibala eminye. Ezi zintathu, ezibomvu, eziluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nephuzi, ziyaziwa njengemibala ephambili.
Yintoni Eyenzekayo Xa Uxuba Imibala Eprayimari?
Ukuba udibanisa ezimbini izibhengezo kunye, udala oko kuthiwa ngumbala wesibini. Ukudibanisa obomvu nokubomvu kwakha obomvu; obomvu nephuzi ukwenza i-orange; ophuzi nolubhakabhaka ukwenza uhlaza. I- hue ngqo yombala wesibini odibeneyo kuxhomekeke kuloluphi olubomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluphuzi olusebenzisa kunye nokulinganisela okudibanisayo. Ukuba udibanisa imibala emithathu yokuqala, ufumana umbala ophezulu .
Kuthiwani Ngomnyama Nomhlophe?
Okumnyama nomhlophe akunakwenziwa ngokudibanisa kunye neminye imibala, kodwa njengoko ingasetyenziswanga kumbala wokudibanisa ukwenza imibala, ayifumanwanga kwi-theory of mixing theory. Ukuba ungeze umhlophe kumbala uyayicima kwaye xa ukongeza umnyama uyawumnyama (nangona abanye abapendeli bengasebenzisi abamnyama nonke, bona uMbala Udibanisa Isifundo: Umnyama Nomhlophe).
Azikho iindawo ezahlukeneyo zeBlues, iReds, kunye neeNtsundu?
Ewe, unokuthenga iintlobo ezahlukeneyo zeeblues, i-reds, kunye ne-yellows. Ngokomzekelo, iiblues ziquka i-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka, i-blue bullet, i-ultramarine, i-blue-blue, ne- Prussian blue . Iingcingo ziquka i-alizarin ebomvu okanye i-cadmium ebomvu, kunye ne-yellows cadmium ephuzi, i-cadmium ukukhanya okuluhlaza, okanye i-lemon eluhlaza. Le yonke yimibala ephambili, iinguqulelo ezahlukeneyo.
Yiyiphi i-Colors Primary Primary omele ukuyisebenzise?
Akusiyo umbuzo wokuba uphuhliso olungundoqo okanye olungalunganga ukusebenzisa, kodwa kunokuba luhlaza okwesibhakabhaka, obomvu nolulusu, kwaye luvelisa umphumo ohlukileyo xa uxutyaniswa. Icandelo ngalinye leemali zokuqala liza kuvelisa into eyahlukileyo, ngamanye amaxesha kuphela ngokuhlukileyo.
Qalisa nge-Triangle Theory Triangle
Phrinta umbala wokudibanisa i-Triangle Worksheet kwaye uyipeyinise. Kudibanisa umbala kwizinto eziphambili, isinyathelo sokuqala ekuhambeni ngombala.
Iimbala ezifudumele kunye ezipholileyo
UCarolyn Hebbard / Getty Izithombe
Wonke umbala unomdla othile kwizinto ezibizwa ngokuthi zifudumele kwaye zipholile. Akuyona into ephazamisayo; buqhetseba. Kodwa yinto ebalulekileyo ekudibaniseni umbala njengoko ichaphazela iziphumo.
Njengeqela, i-reds kunye ne-yellows ithathwa njengemibala efudumele kwaye ibhakabhaka umbala opholileyo. Kodwa ukuba uthelekisa i-reds ehlukeneyo (okanye i-yellows okanye iblues), uya kubona ukuba kukho iinguqulelo ezifudumele kunye nezipholileyo ngamnye kule mibala (ezihambelana nomnye kuphela). Ngokomzekelo, i-cadmium ebomvu ngokuqinisekileyo iludumele kune-alizarin crimson (nangona i-alizarin crimson iya kuhlala ifudumele kunokuba, ithi, i-blue).
Kutheni Ndifuna Ukwazi Ngemibala Efuthe Neyakhayo?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imibala yamanye ine-bias epholile okanye efudumeleyo yokudibanisa umbala. Ukuba udibanisa iimbini zombini kunye kunye, uya kufumana umbala wesibini obushushu kwaye, ngokuchaseneyo, ukuba udibanisa ezimbini zidibene kunye uya kufumana isibini epholile.
Umzekelo, ukuxuba i-cadmium yellow kunye ne-cadmium ebomvu kudala i-orange efudumele. Ukuba udibanisa i-lemon ephuzi kunye ne-alizarin elibomvu, ufumana ipholile, i-gray orange. Ukudibanisa imibala yesibini akukona nje ngokulinganisela apho udibanisa khona imibala emibini eyintloko, kodwa ukwazi nokwahlula okuhlukeneyo, i-yellows, kunye ne-blues.
Guido Mieth / Getty Izithombe
Imibala yesiqulatho yenziwa ngokuxuba imibala emibini ebalulekileyo: obomvu nephuzi ukufumana i-orange, eluhlaza okwesibhakabhaka neyibhakabhaka ukuze iluhlaza, okanye ibomvu neyibhakabhaka ukuze ibe nemfusa. Umbala wesibini owufumanayo uxhomekeke kwizinga apho udibanisa khona izibini ezimbini. Ukuba udibanisa imibala emithathu yokuqala, ufumana umbala ophezulu. Imibala yesiqulatho yenziwa ngokuxuba imibala emibini ephambili. Ubumba obomvu nolutyheli; obomvu neluhlaza okomhlaza; ophuzi nolubhakabhaka ukwenza uhlaza.
Ndingayazi Njani Imibala Yethu Yokuqala?
Olubomvu noluphuzi bahlala benza uhlobo olune-orange, oluhlaza okwesibhakabhaka nolusibhakabhaka oluhlaza, kunye nolubomvu nolomvu obomvu. Umbala owenayo uxhomekeke kwiyiphi intloko oyisebenzisayo (umzekelo ukuba ingaba yi-Prussian eluhlaza okanye ultramarine uxuba kunye ne-cadmium ebomvu) kunye nokulinganisela okudibanisa kuzo izibini ezimbini. Yenza ipeyiti yombala apho urekhoda ukuba imiphi imibala emibini udibanise kunye (i-approximate) nganye. Oku kuya kukunika isalathiso esilungileyo de uze ufike kwisiteji xa uziqonda ngokusemthethweni oko uya kufumana.
Ingakanani Umbala ngamnye oPhambili oyisebenzisayo?
Ubungakanani obudibanisa ngayo iimbini ezimbini zokubaluleka kubalulekile. Ukuba ungeze ngaphezu komnye, umbala wesibini uza kubonisa oku. Ngokomzekelo, ukuba ungeze obomvu ngaphezu kohlobo oluphuzi, ugqiba nge-orange enamandla, ebomvu; Ukuba ungeze okwesibhakabhaka kunobomvu, uvelisa i-orange ephuzi. Zama ngayo yonke imibala onayo - kwaye ugcine irekhodi yento oyenzile.
Ukuxubana vs Ukuthenga Imibala Eyilungiselelwe
UMichael Blann / Getty Images
Ukudibanisa imibala kukunika uluhlu lwembala kunye nenani elincinci leemibala yepende (luncedo gqitha xa upenda ngaphandle kweso studio yakho). Ukuba usebenzisa umbala othile, mhlawumbi uya kuthatha isigqibo sokuba kulula ukuyithenga kwi-tube ngaphandle kokuyixubusha kwakhona.
Kodwa uya kufumanisa ukuba kuya kuba soloko umzekelo xa umbala owufunayo nje awufiki ukulungelelwanga, njengobuncwane obuthile kwilizwe. Ulwazi lwakho lokuxuba umbala luya kwenza ukuba ulungelelanise ukuluhlaza okwenziweyo okwenziwe emthunzini oyifunayo.
Inzuzo yokuthenga umbala we-premixed yiyo ukuba uqinisekiswa ukuba ufumana i- hue efanayo rhoqo. Kwaye kunye nemibala engezantsi ye-pigment, efana ne-cadmium orange, inomsebenzi obunzima ukufanisa nemibala edibeneyo.
AmaBrowns kunye nama grays aqukethe yonke imibala emithathu ephambili. Ziyadalwa ngokuxuba okanye yonke imibala emithathu ephambili okanye umbala oyintloko kunye nesekondari (imibala yesibini eyenziwa ngamacandelo amabini okuqala). Ngokutshintsha ubukhulu bombala odibanisayo, udala imibala eyahlukeneyo ephakamileyo.
Iyiphi indlela elula kakhulu yokudibanisa uBrown?
Hlanganisa umbala oyintloko kunye nombala ohambelana nawo. Yongeza i-orange eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, okanye eluhlaza okomvu. Ngayinye yalezi zinto zenza umbala obomvu, ngoko kwakhona uphinde wenze isatidi yombala ukunika inkcazelo ngokukhawuleza ekubhekiselele kuyo.
Iyiphi indlela elula kakhulu yokudibanisa iGrey?
Hlanganisa i-orange (okanye iphuzi kunye nobomvu) kunye ne-blue bese wongeza emhlophe. Uza kufuna uninzi oluhlaza okwedlula i-orange, kodwa uzama ubuninzi bemhlophe oyisebenzisayo. Unokuxubusha umbala obomvu nombala womhlaba, njenge-umber ebomvu okanye i-sienna etshisiweyo. Ngokuqinisekileyo nge-watercolor awunayo ipende emhlophe; Ukukhanyisa imvila ungeze amanzi amaninzi kunokuba umhlophe, kodwa khumbula i-grey iya kukhanya xa imile.
Kutheni Kutheni Imibala Yami Ephakamileyo Iqhubeka Iguqula Umdaka?
Ukuba udibanisa imibala emininzi kunye, uya kufumana udaka. Ukuba i-gray yakho okanye ibomvu ingaveli ngendlela ofuna ukuyifumana ngayo, qalisa ukuqala ngaphezu kokufaka umbala ophezulu kwithemba liya kusebenza.
UDimitri Otis / Getty Izithombe
Umbala ogqityiweyo wombala oyintloko (obomvu, obomvu, okanye ophuzi) ngumbala owufumana ngokudibanisa emibini imibala ephambili. Ngoko umbala ogqityileyo obomvu uluhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka nolunxwemeni, kunye nokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Kuthiwani Ngemibala Engundoqo?
Umncedisi wombala wesibini ngumbala oyintloko ongasetyenziswanga ukwenza. Ngoko umbala ogqityileyo wobomvu ubomvu, uluhlaza luhlaza okwesibhakabhaka, kwaye umbala obomvu uluphuzi.
Kutheni iikholeji eziPhambili zibalulekile kwi-Theory?
Xa kufakwe ecaleni komnye nomnye, imibala eyongezelelweyo yenza ukuba omnye nomnye avele ebonakalayo, ngakumbi. Umthunzi wento uza kuqulethe umbala wayo odibeneyo, umzekelo isithunzi se-apple eluhlaza siya kuba nebomvu.
Ndingakukhumbula Kanjani Oku?
Umbala wonxantathu njengokuba (kuboniswe ngasentla) kwenza kube lula ukukhumbula: le mibala emithathu ephambili ikhoneni. Umbala owufumana ngokudibanisa amabini e-primaries phakathi kwabo (obomvu nephuzi ukwenza i-orange; Umbala ohambelana nombala oyintloko umbala ochasene nawo (uhlaza kuncedisa obomvu, i-orange eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nobomvu okwesibhakabhaka).
Phrinta umbala odibanisa i-Triangle Worksheet Worksheet uze uyipende. Ungabonakala njengomsebenzi olula, ulungele ukuchitha ixesha, kodwa uyisinyathelo sokuqala kwindlela yokwenza umzobo oyisisiseko - ukuxuba umbala ophumelelayo. Yifake eludongeni apho ungayibona khona ngokukhangela kuze kube yilapho ungena ngaphakathi phakathi kwemibala yimivuzo, izibini zesekondari, i-tertiari kunye nabongezelelisi.
Yintoni eyenzekayo xa udibanisa imibala edibeneyo?
Ukuba udibanisa imibala ehambelanayo kunye nomnye, ufumana umbala ophakamileyo, ngakumbi u-browns (kunokuba i-grays).
Umbala we-Theory Isifundo: Ukusebenzisa abamnyama nabamhlophe
Ena Sager / EyeEm / Getty Izithombe
Ngoxa kubonakala ngathi kunengqiqo ukuba ululaze umbala oyifaka umhlophe kuwo kwaye ukuba udibanise udibanisa omnyama, oku kukugqithisa. I-White iyancipha ukugqama ke ngoko nangona yenza umbala okhanyayo, uyisusa i-vibrancy. Umnyama akafaki ubuninzi obunjengobumnyama (nangona kukho iziganeko apho abamnyama bancedo ngokukhethekileyo, njengoluhlu lwemifino lunokuvelisa xa luxutywe nephuzi!).
Kutheni ndingenako ukufaka umhlophe ukukhanyisa umbala?
Ukongeza umhlophe kumbala uvelisa umbala wolubala, kwenza umbala obala (njenge-ultramarine) opaque, kwaye ucoce umbala. Oku kubonakala kakhulu ngokubomvu, okutshintsha ukusuka ebomvu efudumele ibe ngepinki epholile xa usebenzisa i-titanium emhlophe. Unokongeza umhlophe ukuze ukhanyise umbala, kodwa ngenxa yokuba oku kususa i-vibrancy yombala uza kugqiba umfanekiso ohlambulukileyo ukuba usebenzise umhlophe ukuze ukhanyise yonke imibala. Kunoko uhlakulele izakhono zokudibanisa umbala ukuvelisa ii-hues ezinamandla. Ngokomzekelo, ukukhanyisa obomvu, yongeza okwesibhakabhaka kunokuba umhlophe (okanye uzame i-white yinki). Iipopu ze-Watercolor ziyi-transparent, ngoko ke kukukukhanyisa nje ukongeza amanzi amaninzi ukupenda ukuvumela ukuba umhlophe wephepha uphume.
Kutheni Ndikwazi Ukufaka Umnyama Ukuze Ndimnyama Umbala?
Umnyama uhlambela kwimbala engcolileyo kunokumnyama. Kubomnyama abaqhelekileyo, iMnyama emnyama iyona mnyama kakhulu kwaye i-opaque kakhulu, umnyama wendlovu unelinen ephantsi ebomvu, kunye nesibane esimnyama ngezantsi.
Umbala we-Theory Isifundo: Ukugwema abamnyama kwiSithunzi
Mondadori ngeGetty Images / Getty Izithombe
Cinga ngobunjani bemnyama ngokwenene. Iimvulo azigcini nje zimnyama okanye iingubo ezimnyama zombala wezinto. Ziqukethe umbala ohambelana nento.
Thatha, umzekelo, isithunzi kwisintu esiluhlaza. Ukuba udibanisa umnyama nomnxeba, ufumana uhlaza omnquma ongathandekiyo. Esikhundleni sokusebenzisa le simthunzi, sebenzisa umfusa obomvu. I-Purple ibe ngumbala ogqityileyo ophuzi, zombini uya kubonakala ebonakalayo. Ukuba ungeke ukwazi ukuba yimiphi imibala emthunzini, yenza lula ukuba ukhangele ntoni ngokubeka isandla sakho okanye iqela lephepha elimhlophe elikufutshane nelokuba unenkxalabo, uze ukhange kwakhona.
Ngaba Abadwebi Basoloko Basebenzisa Abomnyama?
Ngezihlandlo ezahlukahlukeneyo kwimisebenzi yabo, i-Impressionists ayisebenzisanga abamnyama nonke (fumana oko bakusebenzisa endaweni yoko ). Thatha i-Monet imizobo yeRouen Cathedral ekuseni ilanga lonke, kwindawo epholileyo, kunye ne-golide kunye negolide ukuze sibone ukuba yiyiphi ingqiqo enokuyenza ngezithunzi (wenza iingubo ezingama-20 ze-kedralra ngamaxesha ahlukeneyo emini). Akuyinyani ukuthetha ukuba i-Impressionists ayizange isetyenziswe emnyama, kodwa ngokuqinisekileyo yayisasaza le ngcamango.
Okanye ukuba awukwazi ukuzibona usebenza ngaphandle kobumnyama, qwa lasela ukuxuba umnyama omnyama kunokuba usebenzise umnyama obunqamle. Kwakhona kunenzuzo yokuba 'ukubulala' umbala udibene kunye nomlinganiselo ofanayo.
Indlela yokuvavanya ukuba umbala wePaint u-Opaque okanye u-Transparent
Indlela yokuvavanya ukuba umbala wePaint u-Opaque okanye u-Transparent. Umfanekiso: © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Imibala ehlukeneyo inezinto ezihlukeneyo zokugubungela. Ezinye zibonakala zibala , zingabonakali ngaphaya komnye umbala. Abanye baninzi kakhulu, bafihla into engaphantsi. Ukuqwalasela oku, kwaye kungekhona nje umbala, unokunyusa isifundo. Umzekelo, ukusebenzisa ibhakabhaka ebonakalayo esibhakabhakeni kunika ukuvakalelwa okukhulu kunokuba i-opaque blue will. Ukuqulunqa ishati yemibala oyisebenzisayo rhoqo, njengaleyo ngasentla, ibonisa ngokubheka indlela obala ngayo okanye opaque umbala.
Yonke imibala oyipende ngayo.
Ubukhulu beesayizi eziqhelekileyo.
Isambatho sokusula i-brush.
Jar yamanzi acocekileyo.
Ipeni ukurekhoda amagama ombala.
Icandelo lephepha elimhlophe. Ukuba unemibala emibini, ufuna iphepha malunga nobukhulu be-A5 .
UMlawuli (ukhetho, imigca eqondileyo ayibalulekile).
I-Hairdryer (ukhetho, i-acrylics okanye i-watercolors).
Indlela yokwenza ishadi:
Hlela imibala yakho ngomyalelo onengqiqo kuwe, njengombala wemibala (umlambo).
Hlanganisa encinane yombala ngamnye. Yenza umdwebo wecala ngalinye. Lindela ukuba zome.
Yenza imidwebo engqamleyo yonke imibala, ngokufanayo.
Ukuba usebenzisa umlawuli, sula umgca emva komgca ngamnye ukuze ungangcolisi olandelayo.
Rekhoda amagama emibala ecaleni komgca ngamnye.
Iingubo ze-opaque zizinzi kwaye zivame ukuvimba ezinye imibala. Oku kwenza ukuba kube lula kwizifundo ezinamandla kwaye zinzima, ezifana nezixhobo zomthi.
Iingubo ezigqithisileyo zilula kwaye zibonisa umoya, zingabonakali ngaphezu kweminye imibala. Oku kwenza ukuba kube lula kwizifundo zemozulu ezifana neentsimbi eziphosakeleyo okanye iingubo ze-diaphanous.
I-semi-transparent iphakathi kwezinye ezimbini.
Ngexesha, akuyi ku funeka ubhekisele kwitshati, kodwa uya kuziqonda ngokusemthethweni izakhiwo zombala othile. Kuze kube ngoko, gcina ishati ephakamileyo eludongeni apho ungayibona khona xa udweba.
Indlela yokudweba phezu kwepeyinti yeoli engapheliyo
Ngaba i-Impressionists ipeyinti imithunzi?
Iingcebiso eziSebenzayo ezili-10 zoTyhuphu yokuPenda
Ukudweba Iimvula eziManzi eziNzileyo usebenzisa ii-Acrylic okanye ii-Oyile
Isenzo sePaintra yoTyhulwa ngeNzathelo
Indlela yokwenza umzobo nge-Wire kunye ne-D-Rings
Iingcebiso ezi-10 ezikhuselekileyo zoKhuseleko
Indlela yokudweba izibhengezo kwiSithombe
Indlela yokubhala i-hiragana: wa, yebo, n-わ, を, ん
Iimvelaphi eziziwayo: A ukuya kuZ
Ziziphi Amazwi Angenamazwi?
Inkolelo yeSeli: I-Principal Principal ye Biology
Izigqibo zeSeneca Falls: Amalungelo amabhinqa afuna iimfuno ngo-1848
Ukuphucula i-Clubhead Speed ​​nge-Exercise ejoliswe kuyo
I-Göbekli Tepe - IQumrhu leCult Early in Turkey
Indlela yokwenza i-Yule Log
Indlela yokudweba kunye neKokethi yeekati
Ziziphi iimpawu zomdaniso wamanje?
Kuphi Ukuthenga i-Sodium Hydroxide okanye iLye
Indlela yokukhumbula ngeeLines
Iimidlalo ezininzi eziphambene neCawa lama-20
Indlela yokugcwalisa ifomu 941 I-Quarterly Federal Tax Return Return
Iinqununu ezi-5 ze-Classic Classic ne-Trim ukusuka kuma-50s